Wararka Maanta: Khamiis, Jun 28, 2018-Madaxweynaha dalka Jabuuti oo ka hadlay dacwada kala dhaxeysa shirkadda DP World
Wararka Maanta- Khamiis, Jun 28, 2018
Madaxweynaha dalka Jabuuti oo ka hadlay dacwada kala dhaxeysa shirkadda DP World
Khamiis, June, 28. 2018 (HOL) -Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku eedeeyay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka in aysan ogoleyn hormar ay sameeyaan dekeddaha kale.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Jabuuti ay leedahay saamiyada ugu badan shirkadda, ayna arkeen shirkadda DP World aysan ka shaqaynaynin danaha dekedaha Jabuuti, sidaasna ay ula wareegeen maamulka.
Mar uu soo hadal qaaday Madaxweyne Ismaaciil ayaa ka hadlay dacwad u dhaxeysa dowladiisa iyo shirkadda dekedaha ee DP World, taas oo dowladda Jabuuti ay ka wareejisay maamulka dekada Dooraale.
Jabuuti ayuu sheegay in ay leedahay saamiyada ugu badan shirkadda, ayna arkeen shirkadda DP World aysan ka shaqaynaynin danaha dekedaha Jabuuti, sidaasna ay ula wareegeen maamulka.
"Waan u ogolnahay saamigoodiii, balse waa in la'isu ixtiraamaa sida loo kala saami badan-yahay".
Madaxweynaha Jabuuti ayaa xusay in isagoo ilaalinaya rabitaanka shacabkiisa iyo dastuurka dalkiisa uu ku baabi’iyay heshiiskii ay hore ula galeen shirkadda DP World.
Dowladda Itoobiya oo sii deysay Cabdikariin Muuse QalbiDhagax
6/28/2018 4:42 PM EST
Khamiis, June, 28, 2018 (HOL)–Dowladda Itoobiya ayaa ugu danbeyntii Xabsiga ka sii deysay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa Ururka ONLF bilihii ugu danbeeyayna u xirnaa dowladda Itoobiya.
Shirkii golaha Wasiiradda Somaliland oo maanta lagaga dooday amniga iyo xuduudaha bariga
6/28/2018 11:01 AM EST
Khamiis, June, 28. 2018 (HOL)-Shirkii golaha wasiiradda Somaliland, ayaa maanta lagaga hadlay arrimaha amniga iyo xuduudaha.
Weerar kale oo ka dhacay saldhiga dhexe ee magaalada Laascaanood
6/28/2018 9:49 AM EST
Khamiis, June, 28. 2018 (HOL)-Dabley hubaysan ayaa rasaas la beegsatay saldhiga ku yaala badhtamaha magaalada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool.
Nabadsugidda Jubbaland oo Kismaayo ku soo bandhigtay rag kasoo goostay Al-shabaab
6/28/2018 9:26 AM EST
Khamiis, June, 28, 2018 (HOL)– Saraakiisha ciidamada nabadsugidda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo kusoo bandhigay ilaa 12 nin oo ay sheegeen in ay kasoo goosteen maleeyshiyaadka Al-shabaab, kuwaa oo qaar kamid ah oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in ay ahaayeen gudoomiyeyaal tuulooyin hoostaga degmada Jamaame ee gobolka J/hoose.
Qof hubeysan oo Gabar Wariye ah ku dhaawacay magaalada Muqdisho
6/28/2018 8:17 AM EST
Khamiis, June, 28, 2018 (HOL)–Wararka inaga soo gaaraya Isgoyska Debka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qof hubeysan uu goor dhaw ku dhaawacay Gabar Wariye ah oo lagu magacaabo Farxiyo Mire.
Madaxweynaha Puntland oo isku-shaandhayn ku sameeyay agaasimayaal guud iyo agaasime waaxeedyo
6/28/2018 5:15 AM EST
Khamiis, June, 28, 2018 (HOL)–Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) ayaa isku badalay agaasimayaal guud iyo agaasime waaxeedyo, sida ku cad wareegto goor dhow ka soo baxday xafiiska madaxweynaha.
15 qof oo ku dhimatay dab-qabsaday suuq ku yaalla magaalada Nairobi
6/28/2018 5:11 AM EST
Khamiis, June, 28, 2018 (HOL)– Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay tiro kale oo ka badan 50 qofna waa ay ku dhaawacmeen dab-qabsaday suuq ku yaalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
ONLF shirweyne ku leh magaalada Asmar ee dalka Eritrea
6/28/2018 5:04 AM EST
Khamiis, June, 28, 2018 (HOL)–Jabhadda ONLF ayaa shirweyne uga furmay magaalada Asmara ee dalka Eritrea, iyadoo shirweynaha socda looga hadlayo xaaladihii u dambeeyay ee ku soo kordhay Itoobiya iyo is bedeladii dhacay.
Dowladda Soomaaliya oo dhaxdhaxaadineysa madaxda Galmudug
6/28/2018 4:50 AM EST
Khamiis, June, 28, 2018 (HOL)–Iyadoo bilihii uu danbeeyay uu taagnaa khilaaf xoog leh oo soo kala dhaxgalay madaxda ugu sareysa maamul gobolleedka Galmudug, ayeey hadda ku howlan tahay dowladda Soomaaliya sidii loo dhameyn lahaa is-mar-waaga siyaasadeed.
ICG oo ka digtay dagaal mar kale ka dhaca deegaanka Tuka Raq
6/28/2018 1:21 AM EST
Khamiis, June, 28. 2018 (HOL) - Hay’adda Xasaradaha Caalamka ee International Crisis Group ICG ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in is-marin-waaga Puntland iyo Somaliland uu marayo meel xun, kaddib markii labada maamul ay ciidamo hor leh soo dhoobeen gobolada Sool iyo Sanaag.
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya oo la kulmay dhiggiisa Kenya
6/28/2018 12:53 AM EST
Khamiis, June, 28. 2018 (HOL)-Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Soomaaliya Cabdi Xaanshi Cabdullaahi ayaa kula kulmay magaalada Nairobi ee dalka Kenye dhiggiisa golahaa Senate-ka Kenya Kennedy Lusaka.
UN, AU envoys conduct security assessment on transition plan in Somalia -Xinhua
6/28/2018 11:08 AM EST
15 dead, 70 injured as fire razes Gikomba market in Nairobi -Daily Nation
6/28/2018 4:22 AM EST
US Muslim leaders happy with Turkish election results -Anadolu Agency
6/28/2018 2:44 AM EST
A group of Muslim American opinion leaders visiting Turkey expressed satisfaction at the results of Sunday's presidential and parliamentarian elections.
Experts say women in US face more sexual violence than women in Somalia and Afghanistan -The Daily Caller
6/28/2018 1:29 AM EST
The United States is the third most dangerous country in the world in terms of sexual violence toward women, according to 548 women’s rights experts polled by the Thomson Reuters Foundation.